तनहुँका सासंद सिग्देलद्वारा सांसद विकास कोषको रकम विनियोजन (सूचीसहित) - Dainik Nepal
वीवी श्रेष्ठ २०७७ मंसिर १२ गते १३:१५
तनहुँ, १२ मंसिर । प्रतिनिधिसभाका लागि तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का सासंद केदार सिग्देलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम विनियोज गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी अन्र्तगत ४ करोड रूपैयाँको कार्यक्रम सासंद सिग्देलले विनियोजन गरेका हुन् । आयोजना व्यवस्थापन खर्च रू. ३ लाख ६० हजार र ६ वटा पालिका योजना कार्यक्रमअन्र्तगत रू. ३ करोड ९६ लाख ४० हजार यसै आर्थिक वर्षमा खर्च हुनेगरी विनियोजन गरिएको सासंद सिग्देल बताए ।
उनका अनुसार व्यास नगरपालिका–५ मा राष्ट्रिय परोपकार महासंघ नेपाल तनहूँको ज्येष्ठ नागरिक चौतारी भवनको ट्रस हल निर्माण र दभुङ्ग चण्डीदेवी गुठी सामुदायिक भवनको ट्रस र शौचालय निर्माणका लागि रू. १०/१० लाख, व्यास–६ को सिसाघाट बजारको सिम्लेदेखि मादी नदीको पूलसम्म सडक कालोपत्र गर्नका लागि रू. ३० लाख विनियोजन गरेका छन् ।
यसैगरी म्याग्दे गाँउपालिकामा वरचौर खानेपानी निर्माण सुधारका लागि रू. १५ लाख, निर्मलवस्ती थानसिंह मोटरमार्ग कालोपत्र गर्न रू. १५ लाख, नागढुंगा खेलमैदान निर्माण छाङ्गदीटारका लागि रू. १० लाख, जौखोला धैरेनी मोटर मार्गका छिर्दी दोभान कल्भर्ट निर्माणका लागि रू. १० लाख, जनसहयोगी मोटर मार्ग स्तरोन्नतिका लागि रू. १५ लाख गरी कुल रू. ६५ लाख विनियोजन गरेको जानकारी सिग्देलले दिए ।
यस्तै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाअन्र्तगत काप्रेक खेलमैदान, थप्रेक तथा मुश्लिम सामुदायिक भवन निर्माण भ्याकुतेसहित वडा नं १ मा रू. १५ लाख, आर्दश टोल सामुदायिक भवनको कम्पाउण्ड वाल तथा पार्क निर्माणका लागि रू. १० लाख, भृगु त्रिवेणीधाम शव दाहस्थल निर्माण सुधारका लागि रू. १० लाख, दुलेगौडा नयाँपुलदेखि लालिम जाने मोटरमार्ग कालोपत्र गर्न रू. २० लाख, वडा नं. ७ स्थित कुमाल सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रू. १० लाख, राईपुर कोटकालिका पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. १० लाख गरी रू. ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी भिमाद नगरपालिकामा उत्तर–दक्षिण मोटरमार्गको छाब्दी वराही मन्दिरदेखि सिगारभन्ज्याङ खण्ड स्तरवृद्धि तथा फाँचेथर कोटथर पर्यटकीय पैदलमार्ग निर्माणका लागि समेत रू. १५ लाख, जलौदीदेखि सुनाकोटसम्मको लोकतान्त्रिक मार्ग स्तरोन्नतिका लागि रू. १० लाख, खरखरे खानेपानी योजना सुविधा विस्तारका लागि रू. १५ लाख, नेवा खल भवन निर्माण र जनज्योति माविको क्यान्टिन छानो समेतका लागि रू. ११ लाख ४० हजार भिम देउराली मोटरमार्ग स्तरोन्नतिका लागि रू. १० लाख, वालज्योति आधारभुत विद्यालयको तला थप गर्नका लागि रू. १० लाख गरी कुल रू. ७१ लाख ४० हजार विनियोजन गगरिएको छ ।
यस्तै घिरिङ गाँउपालिकामा पुट्टार ढोपर खोल्सी खानेपानी योजनाका लागि रू. १५ लाख, राधाकृष्ण मोटरमार्ग गोफा–देउराली–डुम्रेवेशीका लागि रू. १५ लाख, अर्चलकोट–मानपुर–खिला खानेपानी सुविधा विस्तारका लागि रू. १५ लाख, नयाँटार गावुडाडा मार्ग स्तरोन्नतिका लागि रू. १० लाख, वनडाँडा खानेपानी योजना सुविधा विस्तारका लागि रू. १० लाख गरी कुल रू. ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरि रिसिङ गाँउपालिकामा झापुटार–धवला–ग्वासलुङ धनवास मोटरमार्ग स्तरोन्नतिका लागि रू. १५ लाख, गोठादी सामुदायिक भवन, सिसेरा खोला खानेपानी योजना स्तरवृद्धि र श्रृङ मावि गोठादी तला थप गर्नका लागि रू. १०/१० लाख तथा शिव सरस्वती माविको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि भौतिक विस्तारमा रू. २५ लाख गरी कुल रू. ७० लाख विनियोजन गरिएको हो ।
हेर्नुहोस् पूरा विवरण–